Forum serasera malagasy Momba ny francophonie - Dinika forum.serasera.org
Momba ny francophonie
Fitohizan'ny hafatra : Momba ny francophonie
Nav - 28/12/2014 16:20
MOMBA NY FRANCOPHONIE: FIVORIANA AN-TAMPONY 2016 ATY MADAGASIKARA ?
Notapahina t@ Fivoriana an-tampon'ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) farany teo tany Dakar, Sénégal fa atao aty Madagasikara ny fivoriana an-tampony manaraka @ 2016.
1	Fa inona izany ? Fa angaha moa miteny frantsay ny Malagasy 22 tapitrisa no sokajiana ho “francophone” isika?
Angaha miteny frantsay manomboka @ 6 ora maraina ka hatr@ 10 ora alina ianareo ao Anosibe An’ala? Angaha miteny frantsay manomboka @ 6 ora maraina ka hatr@ 10 ora alina ianareo any Besalampy? Ary ianareo etsy Arivonimamo?
Ary angaha ny filazan’ny Lalampanorenana malagasy hoe: “Ny teny malagasy sy teny frantsay no teny ofisialy eto Madagasikara” dia ampy hilazana fa “francophone” ny Malagasy? Fahadisoan’ny Fanjakana malagasy io fanaovana amboletra ao amin’ny Lalampanorenana io, lova ratsy nolovain’ny Lalampanorenana rehetra teo aloha nanomboka tamin’ny 1960.
Toy izao ny statistika nomen’ny Foibe momba ny teny (Akademia Malagasy) momba ny fanasokajiana ny Malagasy eo @ lafiny teny teneniny:
83,61%: Miteny malagasy tokana, tsy miteny teny vahiny hafa
15,82%: Mahay teny frantsay ampahany kely (français occasionnel)
0,57%:	Mahay ny teny sy ny sivilizasiona frantsay ary miteny frantsay tanteraka 24 ora/24.
Koa inona no antony isisihan’ny Fanjakana iantsoana io fivoriana momba ny “francophonie” io? Inona ny tombontsoa ho antsika Malagasy 22 tapitrisa maro an’isa @ fampiasana ny teny frantsay? Tsy hita misongadina mihitsy nandritra izay 54 taona nahazoana ny fahaleovantena izay: ny fahaizana teny frantsay tsy mitombo, ny fanandratana sy fankasitrahana ary fampiasana ny soatoavina, ny fomba amam-panao sy ny teny malagasy toa mihen-danja, milentika, milentika ny Firenena, avela hohitsahin’ny teny frantsay sy ny kolontsaina frantsay ve ny fiarahamonintsika malagasy?
Ka inona no tokony hataontsika? Ny manamafy orina ny teny malagasy, manaja ny soatoavina malagasy maha isika antsika, manaja ireo fomba amam-panao nentin-drazana raha toa tsy mifanohitra @ fitsipiky ny fiarahamonina ankehitriny.
Mieritrereta ianao ry Malagasy! Sahia manaja ny an’ny tena, fantaro ny teninao sy ny soatoavina, arovy ary ampiasao ny teny malagasy, raiso ny andraikitrao, tohero ny fanafihana ataon’ireo kolontsaina vahiny.
Ny ahy manokana ho fampiharana an’izany fitsipika izany dia fanomezana torolalana pratika fampiasana ny teny malagasy mba hisakanana ny hitenenana teny frantsay: teto @ fb oh: momba ny fampiasana ny teny malagasy @ fiainana andavanandro : Fampidirana N° telefonna @ teny malagasy rehefa hiantso N° tel.
Mbola ho avy ny tohiny mikasika ny Fomba fanisana @ teny malagasy (ampiasaina rehefa manisa vola oh.) sy ny fitenenana sy fanoratana ny teny malagasy @ Abidia malagasy vaovao (ilaina dieny any @ kilasy Garabola T1-T2 ho an’ny ankizy mpianatra madinika rehetra manerana ny Nosy).
Azoko antoka fa rehefa hampiasa io TENY MALAGASY NARENINA io isika dia afaka hitraka @ izay, afaka mampiseho ny maha Malagasy antsika, tsy ho menatra ianareo diaspora sasany rehefa hiteny teny malagasy, tsy handadilady hangataka “francophonie” intsony, afaka mijoro tsy ho resy sy tsy latsa-danja mihitsy rehefa mampiasa ny tenintsika, afaka mijoro miohatra @ ireo firenena maro manodidina antsika eto @ ity faritry ny Oseana Indiana Andrefana misy antsika ity.
Tokony hijery ny tantara sy ny toe-javatra jeopolitika ankehitriny isika:
•	Teny inona no be mpampiasa indrindra manodidina antsika (Afrika Atsimo, Mozambika, Tanzania, Kenya, India, Australia, . . .)? Teny englisy.
•	Teny inona no be mpampiasa indrindra eo @ siansa sy teknolojia, fototry ny fandrosoana na eo @ indostria na fambolena na fiompiana? Teny englisy.
Hita @ ireo valim-panontaniana ireo fa raha teny vahiny no resahina dia ny teny englisy no tokony homena vahana sy hanokanana teti-bola betsaka : mazava ho azy anefa fa tsy ahomby izany fianarana sy fampiasana teny vahiny izany raha tsy tsara orina ny Teny malagasy; noho izany, tokony ho karakarain’ny Fanjakana mafimafy kokoa io Teny malagasy io, tokony hampiana tosika henjana sy mitojo @ fanomanana tetibola sahaza sy mitohy ao fitantanan-draharaham-panjakana ho an’ny Teny malagasy @ lafiny maro (fampianarana, raharaham-panjakana, serasera. . .).
2	Fa ity koa ny ahiahy iray: aiza ny tetibola handraisana an’io fivoriana antampony io? Fivoriana antampony = fandraisana filoham-pirenena miisa 53 = villa vaovao + aotomobily vaovao miisa 53 + fandaniana hafa manodidina ny fivoriana . . .
Mbola tsy tafavoaka krizy isika izao, sarotra ny hilaza fa ho tafavoaka krizy isika @ 2016. Dia ahoana izany?
FEHINY: Tsy ilaina ny mandray io fivoriana antampony io @ 2016.
Raha handany vola dia izay tetikasa tena ilaina eo no eo no atao, oh: fandriampahalemana, fiarovana ny fahasalamana, karaman’ny mpampianatra FRAM, . . .(santionany ihany ireo satria ireo no tena mavaivay izao, misy hafa koa).
Raha tetikasa lavitr’ezaka indray dia ny fampianarana anisany ary tokony hatao laharam-pahamehana voalohany mihitsy araky ny efa nolazaina tery aloha (tsy hadino akory ny sehatra hafa: fiompiana, fambolena, fahasalamana, . . .°). Ny tiana avoitra eto @ fitsinjarana ny tetibolam-panjakana dia ny lanjan’ny fampianarana + fanabeazana, indrindra indrindra ny fampiananarana Ambaratonga I: FANTARONTSIKA MALAGASY FA IZAY FIRENENA TSARA FOTOTRA EO @ FAMPIANARANA AMBARATONGA I NO MANDROSO ERAN’IZAO TONOTLO IZAO (USA, JAPON, INDIA, EOROPA, . . .).
Tokony hiomana lavitra dieny izao isika hanarina ny goragora nataon’ny Fanjakana rehetra teo aloha momba ny fampianarana fa tsy tokony ho voarebirebin’izay “francophonie” tsy ampandroso velively ny Firenena.
Fiffi - 28/12/2014 20:27
Nav fa tsy tokony ho voarebirebin’izay “francophonie” tsy ampandroso velively ny Firenena.
heu....taraiky be ianao zany an !
tadiavo aloha ny tena dikan'we francophonie ....
....tsy midika velively ny francophonie we zao sy zao araky ny lazainao....
La francophonie peut renvoyer tant à l'ensemble des pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions membres de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF)2, qui ne sont pas forcément ceux où le français est le plus fréquemment utilisé ou reconnu officiellement.
.....jereo tsara aloha eh.....
Nav - 01/01/2015 18:26
Ny dikan'ny "francophonie" ve no asainao tadiavina? Miteny ho azy io teny io.
Tsy ny dikan'ny "francophonie" no ilaiko fa ny fampiasana na ny nampiasana ny "francophonie" eto Madagasikara na izay fikasan'ny sasany hampiasa io "francophonie" io eto Madagasikara.
Jereo tsara, hoy ianao? Hamafisiko ny fehezanteny namaranako ny lahatsoratro: "Tsy tokony ho voarebirebin'ny francophonie tsy ampandroso velively ny Firenena malagasy".
Ataovy ny tomban'ny vokatry ny "francophonie" eto Madagasikara nandritra izay 100 taona mihoatra izay: 65 taona fanjanahantany + 55 taona fahaleovantena = Faharesena tanteraka, anisan'ny gistra eran-tany ny Malagasy eo @ toekarena, gistra eo @ indostria, mbola tsy mahavelotena akory aza eo @ fambolena sy fiompiana, ny fampianarana sy fanabeazana moa dia mety ho anisan'ny gistra koa, izao firenena malagasy 2015 izao no vokatr'izany fampiasana ny "francophonie" izany eto Madagasikara.
Mila porofo hafa koa ianao? Ampitahao ny firenena afrikanna maro "francophones" sy ireo firenena afrikanna "anglophones": resy ny francophones ary raha mbola mitohy hijanona @ toe-tsaina "francophone" dia ho very lavitra, sarotra vao tafarina miohatra @ ireo anglophones, ny firenena vao mihoitra ao Azia moa tsy tenenina intsony, ireo lazaina hoe "dragona kely" (oh: aiza izao i Vietnam izay mba nitovitovy t@ Madagasikara t@ 1945? ary aiza ho aiza ireo firenena aziatika madinika toa an'i Malayzia na Indonezia tsy francophone koa? na jereo koa izany Korea Atsimo izany izay firenena madinika talohan'ny 1945?)
Mahafantatra ny tena zava-misy eto Madagasikara ve ianao? Mipetraka eto Mafagasikara ve ianao sa any ivelany?
Diniho ny tena zava-misy eto Madagasikara @ lafiny rehetra na sehatra inona na sehatra inona, jereo tsara ireo tena Malagasy 83% tsy miteny frantsay manerana an'iMadagasikara: aiza ho aiza ny toeran'izy ireo ankehitriny? Ary na ireo lazaina hoe manampahaizana malagasy vitsy an'isa aza (maro @ izy ireo no mitovy fahaizana @ ireo vahiny), mahay teny frantsay aiza ho aiza no misy azy ireo eto Madagasikara miohatra @ ireo teratany vahiny?
Ireo zava-misy rehetra hita ankehitriny eto Madagasikara ireo no mampiseho ny tena toe-tsaina "francophone", mampiseho ny toe-tsaina nitondran'ny Fanjakana frantsay ireo zanatany frantsay, ary mampiseho ny toe-tsaina nitondran'ny Fanjakana malagasy nandritra ny fahaleovantena 1960-2014 nandova ny francophonie, ireo zava-misy rehetra ireo no anambarako fa tsy miteraka voka-tsoa ho an'ny Firenena malagasy ny "francophonie", noho izany tsy mety ho an'ny Firenena malagasy.
sitlo - 05/03/2015 02:05
Zanatany amin'ny fomba hafa e.
sitlo - 05/03/2015 02:06
Nav - 13/03/2015 14:59
Misaotra eh! Hanao filaharana an-dalambe hono ry zareo amin'y Alahady 15 Marsa izao ka indro misy tsipy hevitra ho an'ireo hikasa hanao izany filaharana izany, eto amin'ny Forum Serasera aho izao koa dia alefako aminareo ny tiako holazaina, alefako koa any amin'ny internet Serasera ary koa any amin'ny facebook.
FILAHARANA AN-DALAMBE HO AN’NY “FRANCOPHONIE” AMIN’NY ALAHADY 15 MARSA?
Toa misy fikasana hanao filaharana an-dalambe ho an’ny “francophonie” amin’ny Alahady 15 Marsa karakarain’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny sy ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)?
Fa inona no tombontsoa ho azonareo mikasa ny hilahatra amin’io filaharana io? Te hianatra teny frantsay ve ianareo? Fa angaha tsy any an-tsekolinareo no hianaranareo teny frantsay?
Ianareo teratany malagasy miteny frantsay koa anie ka vitsy dia vitsy: 0,57%-n’ny malagasy, io taha io aza mbola hihena satria ny malagasy maro anaka, mitombo be ny isan’ny mpiteny malagasy noho ny isan’ny mpiteny frantsay.
Ary mahay teny malagasy tsara ve ianareo? Efa nivoatra io teny malagasy io amin’izao fotoana izao efa matanjaka, voasokajy ho teny miampita sisintany (langue transfrontalière) amin’ity Faritra Oseana Andrefana ity ka azo ampiasaina tsara eo amin’ny fampianarana sy eo amin’ny lafiny siantifika?
Toy izao ny statistika momba ny teny malagasy:
99%-n’ny malagasy : miteny malagasy
0,57%: miteny frantsay tsara = teny frantsay madio manaraka fitsipiteny + voambolana feno + fahaizana ny sivilizasiona sy tantaran’i France, mety miteny frantsay 24 ora/24 ianareo any an-tokantranonareo.
Ireo malagasy 99% dia mitsinjara toy izao:
83%: tsy miteny afa-tsy teny malagasy irery, tsy mahay tenim-pirenena hafa mihitsy
16%: miteny malagasy + mahay teny frantsay TSIZARIZARY = teny frantsay be diso tsy manaraka fitsipiteny, teny frantsay mavozo, tsy ampy voambolana izay mety mivilana aza indraindray.
Koa fampianarana teny frantsay inona no kasainareo atao, 50 taona izao no nampiasana teny frantsay tao anatin’izay fotoana niverenan’ny fahaleovantena izay kanefa na ireo mpianatra manana “bacc” miditra eny amin’ny Universite aza maro no tsy mahay teny frantsay ka manahirana ireo mpampianatra?
Sa te hilahatra hanao “carnaval” ho an’ny sekolinareo ianareo? Angaha tsy eo an-tokotaninareo no fanaovana izany “carnaval” izany? Ary toa efa dila koa ny fotoana fanaovana an’izany “carnaval” izany raha te hiaraka amin’ny “carnaval” malaza any Rio, Brezil? Sao diso daty àry ianareo?
Ary sao diso toerana koa? Sao dia toeran-kafa no tianareo hanaovana filaharana? Mba raiso aloha ny sarintaninareo amin’ity Faritra Oseana Indiana Andrefana ity: sao dia any Maputo, Mozambika no tsara halehanareo? Miteny swahili sy portiogezy io firenena io ka mba te hianatra teny frantsay sy te hahita ny Tour Eiffel any Paris?
Ary sao atsy Mombassa na Nairobi, Kenya? Miteny swahili sy englisy io firenena io sa atsy Durban, Afrika Atsimo izay mety te hianatra teny frantsay ary samy te hahita ny Tour Eiffel daholo?